people Nepal » आजको राशिफल – मिति वि।सं। २०७३ साल चैत्र ७ गते सोमबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ मार्च २० तारीख आजको राशिफल – मिति वि।सं। २०७३ साल चैत्र ७ गते सोमबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ मार्च २० तारीख – people Nepal
आजको राशिफल – मिति वि।सं। २०७३ साल चैत्र ७ गते सोमबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ मार्च २० तारीख
अष्टमी ब्रत, गोरखकाली पूजा, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथी
आज श्री शाके १९३८ वि.सं. २०७३ साल चैत्र ७ गते सोमबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ मार्च २० तारीख, अष्टमी ब्रत गोरखकाली पूजा (दुँदुच्याँच्याँ ) चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथी प्रातः ६:१२ बजे सम्म पश्चात अष्टमी तिथी चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा ७:२२ बजे सम्म पश्चात धनु राशिमा सूर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु (ज्यो. प. सरोज घिमिरे )
स्वास्थ सम्बन्धी समास्याले सताउन सक्छ । अरुको भर पर्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जस आउन सक्छ । धार्मिक क्षेत्रको सामान्य यात्रा रहनाले मनमा हर्ष हुने योग रहेको छ । कामको क्षेत्रमा भने साधारण झन्झट सहनु पर्ला । दाजु भाई बिचको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
ब्यापार ब्यवसायमा सामान्य घाटा आईपर्न सक्छ । पारीबारिक झोरझमेलाले सताउन सक्नेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला तथा सामान्य चोट पटकको योग रहेको छ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । मनमा कुबिचारले बास गर्नाले भोलिको समयमा केहि झन्झज पर्न सक्छ ।
प्रतिस्प्रधामा उत्रन तपाईकोे समय ले त्यति साथ दिने छैन । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । प्रेम सम्बन्धमा केहि सुधार आउने छ । ब्यापार ब्यवसायको निम्ति राम्रो समय रहेको छ । मित्रजनहरु बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ ।
मनोरञ्जनात्मक कार्यमा समय ब्यतित हुनेछ । तपाईको कार्य कुशलताले अरु ब्यक्तिलाई मोहित बनाउन सक्छ । पठनपाठनको क्षेत्रमा समय मध्यम रहेको छ । अरुको सहयोग निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । कुरा काट्रने ब्यक्ति हरुको बृद्यि हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला ।
पारीबारीक साथसहयोगले मन प्रशन्न रहला । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु होला । बिद्या प्राप्ति योग तथा बौधिक बिकाश हुने समय रहेकोछ । सामान्य आम्दानि हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्र जन को साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला ।
तपाईका रोकिएका कार्यहरु पूृनः सुचारु गर्दा सफलता प्राप्त हुनेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ । श्रम परीश्रमको कदर नहुनाले मनमा सामान्य चिन्ता हुनेछ ।
नयाँ कार्यको थालनि ले मन प्रशन्न रहला । खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । पराक्रममा बृद्यि हुनेछ । मान्यजनको भेटघाट बाट मन प्रशन्न रहला । मित्रजन तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार रहने छ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहन सक्छ ।
पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा अरुले सहजै लिन सक्नेछन । तपाई लगानि भोलि लाई बिशेष फाइदा जनक रहनेछ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । मधुर बाणीका कारण बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ ।
अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । मनप्रशन्न रहला । काम काज क्षेत्रमा बिशेष रुचि जाग्नेछ । आय आम्दानि मा बृद्यिहुने योग रहेको छ । परीबारका कोहि सदस्य हरुको स्वास्थ क्षेत्रमा झमेला पर्न सक्छ ।
आम्दानिका स्रोतहरु फेला परेतापनि खर्च बढ्ने सम्भाबना रहेको छ । तपाईको कार्य कुशलताले गर्दा सबै क्षेत्रमा चर्चा चल्नेछ । बिश्वासिलो ब्यक्ति बाट धोकाहुनाले गरिरहेको काममा बिशेष झमेला पर्न सक्छ । कुराकाट्ने ब्यँितहरु को कारण सामान्य चिन्ता बढ्न सक्छ ।
मान्यजनहरुको साथसहयोले कार्य सहज हुनेछ । सामाजिक कार्यमा बिशेष फाईदा हुनेछ । आय आम्दानि क्षेत्रमा बिशेष राम्रो समय रहेको छ । मित्रजनहरु बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला । सामान्य यात्रा रहन सक्छ ।